“ဟစ်တလာ လက်သစ်လိုနေပြီလား” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ဟစ်တလာ လက်သစ်လိုနေပြီလား”
Posted by NAJA on Aug 7, 2011 in Creative Writing, Think Different | 16 comments
ကမ္ဘာကြီးပူနွေး လာတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ငလျှင်တွေ မုန်တိုင်းတွေ စတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေ ပိုမိုဖြစ်လာတယ် ဆိုတာကို အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စစ်တမ်းအရ ၇၅% သောလူတွေဟာယုံကြည်ကြပါသတဲ့… ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း စစ်တမ်းသာ မရှိကောင်းမရှိမှာပါ အများစုကတော့ အဲဒီလိုပဲ ယုံကြည်ကြသလိုထင်ရပါတယ်… ကျွန်တော်လဲ ဟုတ်သလိုလိုနဲ့ယုံရကောင်းနိုးနိုးပါပဲ…
အဲဒါနဲ့ ပဲလျှောက်စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်… တကယ်လို့ များပေါ့ လူအများစုထင်ကြသလိုပဲ သဘာဝဘေး အန္တရယ်တွေ ပိုမိုသာဖြစ်လာနေတယ်ဆိုရင် သဘာဝတရာကြီး တစ်ခုခုကိုများ ကြံစည်နေရော့သလား…
ကမ္ဘာ့လူဦးရေက မကြာတော့တဲ့နှစ်များအတွင်း သန်းခုနှစ်ထောင် ပြည့်တော့မယ်ဆိုပဲ…နှစ်ထောင်ပြည့်နှစ်တုန်းက သန်းခြောက်ထောင်ကျော်ရုံမျှ 6.06 billion သာရှိခဲ့ပေမဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အတွင်းမှာ သန်းတစ်ထောင်နီးပါးပွားများလာတဲ့ သဘောပါပဲ…နောက်ရာစုနှစ်တွေမှာဆိုရင် သန်းပေါင်း တစ်သောင်း နှစ်သောင်း စသည်ဖြင့်ဘာမှ မကြာလိုက်တဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာပေါ်လူတွေ အပြွတ်လိုက်ဖြစ်နေခြေရဲ့လို့တွေးမိပါတယ်… နှစ်တစ်ရာ နှစ်ရာ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ လူတွေအတွက်သာ ကြာကောင်းကြာမယ်… ကမ္ဘာကြီးရဲ့ သက်တမ်းနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် မျက်စိတမှိတ်တောင် ရှိတာမှမဟုတ်တာကိုး… အဲဒိအတွက်များ သဘာဝတရားကြီးက ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာလေးအပေါ်မှာ လူတွေကြပ်ညပ်နေမှာကို မကြည့်ရက်လို့ များ အခုကတည်းက wipe out လုပ်နေလေပြီလားပေါ့လေ…
ဆေးသိပ္ပံပညာဟာ နှစ်ဆယ်ရာစုကနေစပြီးတော့ အလွန့် အလွန် တိုးတက်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်… ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်များတုန်းက ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ အသက်ရာကျော်ရှည်တဲ့လူ ရာဂဏန်းမျှပဲရှိခဲ့ပါတယ်… အခုအခါမှာတော့ သောင်းကျော်သွားပါပြီ… သေတဲ့လူဦးရေထက် လူသားထုပ်လုပ်မှုက ပိုမြင့်နေလေတော့ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း သန်းတစ်ထောင်နီးပါးပွားလာတာ အဆန်းတော့လဲမဟုတ်ပါဘူး… ပညာရှင်တွေကလဲ တတ်နိုင်သမျှ လူသားတွေရဲ့သက်တမ်းကို ဆွဲဆန့် နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာကိုး…
သဘာဝတရားဘက်ကကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဗျာ… တိုးတက်သလား… ဆုတ်ယုတ်သလား… လူဦးရေတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ နေစရာနေရာတွေ.. စားနပ်ရိက္ခာတွေ.. Natural resource ထုပ်ယူသုံးစွဲမှုတွေ စသည်ဖြင့် လိုအပ်ချက်တွေ များများလာပါတယ်… ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားရင် တစ်နေ့ မှာ ရှူနှာရှိုက်ကုန်းကမ္ဘာကြီးနဲ့လူတွေပဲ ကျန်ခဲ့တော့မယ်ထင်ပါတယ်…
လူတွေကိုလူရယ်လို့ မမြင်ပဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာနေကြတဲ့ မျိုးစိတ်တွေထဲက မျိုးစိတ်တစ်ခုအဖြစ်ပဲမြင်ကြည့်ပါ… လူသားမျိုးစိတ်တိုးပွားလာတာနဲ့ အမျှ တနေ့ တခြား အခြားသားငှတ်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေ လျော့နည်းပျောက်ကွယ်ကုန်ပါတယ်… ဒါဟာမျှတရဲ့လား… ကျွန်တော်တို့ အတွက်မေးတာမဟုတ်ပါဘူး… သဘာဝတရားကြီးနေရာကနေမေးကြည့်တာပါ…
ကျွန်တော့်ကိုပြောချင်ကြပါမယ်… “မင်းပြောသလိုဆိုရင် စစ်သွေးကြွတွေ.. အသေခံဗုံးခွဲသမားတွေ.. နော်ဝေလက်သစ် ရမ်ဘို တို့ တတွေကို ကမ္ဘာ့လူဦးရေ လျှော့ချပေးလို့ ဆိုပြီး ကျေးဇူးတင်ရတော့မှာလား” လို့ …. အဲဒီလိုလဲမဟုတ်ရပါ.. အားပေးအားမြှောက်တွေးပေးခြင်းလဲမဟုတ်ပါ… ဒီပို့ စ်တင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကို သေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ ဘာမှန်းမသိပါ… သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆော်သြတာလဲမဟုတ်… လူဦးရေလျှော့ချရေးပညာပေးတာလဲမဟုတ်.. အဖျက်လုပ်ငန်းများကို အားပေးထောက်ခံခြင်းလဲမဟုတ်ရပါ… ပေါက်တတ်ကရ အရူးလွယ်အိပ်ဖွင့်ပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်…. သိုသော် တတ်နိုင်လျှင် မလိုအပ်ပဲ ကိုယ်ဝန်မရအောင်တော့ ရှောင်ကြစေချင်သည်….။ ။
ဖြစ်တည်လာခဲ့သော ယခုလူ့ ဘ၀တွင် လောကဓံ ရှစ်ပါးအား ကြုံကြိုက်ခွင့်ရပြီး ရှစ်ပါးလုံးသော လောကဓံအား ခံနိုင်ရည်ရှိသူ ဖြစ်ရပါစေ...။ ။
View all posts by NAJA →
ကမ္ဘာကြီး က လူတွေ သန်း တောင် ခုနစ်ထောင် ကျော် သွားတာ ဟိုးတလောကဘဲ ကြားလိုက်ရတယ် အိန္ဒိယကလား ဘာလားမသိပါဘူး။ သန်း ခုနစ်ထောင်မြောက် ကလေးလေး မွေးဖွားလိုက်ပြီဆို ပြီး ဟိုးတလေးနဲ့ နားစွန်နားဖျားကြားလိုက် မိသလားလို့။ ကို ပေစုတ်စုတ် ပြောသလိုဆိုတော့ အလိုလေး.. လန့် လန့်စရာပါလား။ အင်း လူတွေလျှော့မလား ကမ္ဘာကြီး ကို ပိုကြီးလာအောင်လုပ် ရမလား ဒါမှမဟုတ် ဇာတ်ကားတွေထဲကလို ဂြိုလ်တွေမှာ သွားနေကြမလား။ အဲ ဒါမှမဟုတ် အနာဂတ် အတွက် ကလေးမွေးနှုန်းလျှော့မလား ပဲ .. ခေါင်းစဉ် ထိပ်က ဟစ်တလာလက်သစ်တော့ မလိုချင်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော် က ဟစ်တလာမှမဖြစ်နိုင်ဘဲ။ ကျွန်တော်က လည်း လူဘဲကယ်တတ်တယ် မသတ်တတ်ဘူးလေ အဟဲ .. ။
မပူပါနဲ့ သိပ်ပံ ပညာရှင်တွေ ကဘာ အသစ်တလုံးထပ်ရှာနေပါတယ်။
(တွေ့မယ် မတွေ့ ဘူးတော့ အာမ မခံနိူင်ပါ။)
…လူဦးရေတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ နေစရာနေရာတွေ.. စားနပ်ရိက္ခာတွေ.. Natural resource ထုပ်ယူသုံးစွဲမှုတွေ စသည်ဖြင့် လိုအပ်ချက်တွေ များများလာပါတယ်…
မှန်ပါတယ်။တိုးတက်လာတဲ့လူဦ်းရေတွေဟာလည်း ထိုင်စားလို့မရပါဘူး။အချိန်တန်ရင် ကိုယ့်အသက်ရှင်ရပ်တည်ရေးအတွက် စားဝတ်နေရေးအတွက် အလုပ်လုပ်ရမှာပါ။ လူတယောက်တိုးလာရင် ပါးစပ်တပေါက်တိုးလာသလို လက်၂ဖက်လည်းတိုးလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ လစာကောင်းတဲ့ ITတွေကို ပဲဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ကြ လို့ တဖက်စောင်းနင်းဖြစ်သွားရင် စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းမှာ အားနည်းလာပြီး ကုန်ဈေးနှုန်းတွေခေါင်ခိုက်မှာကို စိုးရိမ်မိပါတယ်။
…လူသားမျိုးစိတ်တိုးပွားလာတာနဲ့ အမျှတနေ့ တခြား အခြားသားငှတ်တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေ လျော့နည်းပျောက်ကွယ်ကုန်ပါတယ်….
လူကမွေးရင် တနှစ်တယောက်နှုံးသာမွေးပါတယ်။ ငါးဆိုရင် တခါဥရင် သန်းပေါင်းများစွာ ဥပါတယ်။ ငါးတွေကို ဥတဲ့ အချိန်မှာ ထိထိရောက်ရောက် အကာအကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် စားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲ သက်သာစေနိုင်ပါတယ် လို့ထင်ပါတယ်။
pay sote sote says:
nature ပြောတာတွေလက်ခံပါတယ်…ဒုတိယအပိုဒ်နဲ့ ပတ်သက်လို့့ထင်တာတွေ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်… ငါးတွေပေါက်ပွားနှုံးနဲ့ လူမွေးတဲ့နှုံးအချိုးချရင်တော့ ကာမိတယ်ထင်စရာရှိပါမယ်.. အဲဒိငါးဥတွေကို အကာအကွယ်ပေးပြီးစားနပ်ရိက္ခာ အခက်အခဲပြေလည်နိုင်စေမယ်ဆိုတာလဲ လက်ခံပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ သဘာဝကျကျ ဖြစ်နေတာကအဲဒိလိုဖြစ်လို့ မရပါဘူး.. အဲဒိသန်းပေါင်းမြောက်များစွာသော ငါးဥတွေထဲက ငါးဖြစ်လာမယ့် အရေအတွက်ဟာအနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်.. ဂေဟစနစ်အရပါ.. ငါးဥအဆင့်မှာ ငါးဥကိုမှီဝဲနေရတဲ့မျိုးစိတ်တွေ ရှိပါတယ်.. ငါးငယ်အဆင့်ရောက်လာတော့ ထပ်ပြီးမှီဝဲဦးမယ့်မျိုးစ်ိတ်တွေထပ်ရှိလာပါတယ်… food chain အရ မျိုးစိတ်တစ်ခုကိုတစ်ခု မှီခိုနေရတာပါ.. အဲဒါကို ကျွန်တော်တို့ လူတွေ စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ငါးဥတွေကိုထိန်းသိမ်းလိုက်ရင် ဂေဟစနစ်ပျက်စီးပြီး ကျန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေပါ ပျောက်ကွယ်ကုန်မှာပါ..တိရစ္ဆာမျိုးစိတ်တွေဟာလူတွေလို နေရာဒေသမရွေးမနေထိုင်နိုင်ပါဘူး…ဥပမာ အယ်နီညိုနှစ်မှာ ရေစီးကြောင်းပျောင်းသွားတဲ့ အတွက် အဲဒိရေစီးကြောင်းထဲက ငါးတွေကိုမှီခိုနေရတဲ့ ပင်ဂွင်းတွေ ထောင်ပေါင်းများစွာ သေဆုံးရသလိုပါ…
ငါးသာမကပါဘူး ကျန်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေ မျိုးပွါးချိန်မှာ ဖမ်ဆီးသတ်ဖြတ်ခြင်း ရှောင်နိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်စဉ်းစားတာကတော့ ငါးမဖမ်းရ ဆိုတဲ့အချိန်မှာ တံငါသည်တွေ ဘာလုပ်စားကြမလဲဆိုတာကိုပါ။
အကောင်းဆုံးကတော့ သဘာဝကိုသဘာဝအတိုင်း ထားလိုက်တာ.. သဘာဝအကျဆုံးပါပဲဗျာ… လူမျိုးစိတ်ကြီးထွားနေသမျှတော့ အစာရေစာလိုအပ်ချက်အတွက် လုံးပန်းနေရဦးမှာပါပဲ… အားလုံးကောင်းမယ့်နည်းလမ်းကိုတော့ ကျွန်တော်လဲညာဏ်မမှီလို့ မဆွေးနွေးနိုင်ဘူး.. အပျက်တွေပဲပြောနေတော့ အဆိုးမြင်ဝါဒီသမားဖြစ်နေပြီလားတောင်မသိပါဘူး…think different ဆိုတဲ့အတိုင်း မတူအောင် တွေးကြည့်တာပါ…
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ဘာမှန်းမသိဖြစ်သွားတယ်ဗျာ
သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်း ..လူသားမျိုးစိတ်အတွက် အသက်ပိုရှည်အောင် ပိုကောင်းတဲ့ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံအသစ်တွေနဲ့နေနိုင်အောင်..အမျိုးမျိုးတီထွင်ကျပါတယ်..
ဒီလိုတီထွင်မှုတွေအတွက် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ natural resource တွေများစွာပျက်စီးကုန်ပါတယ်..
ဒါ့ကြောင့်လဲ ..ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတယ်..သစ်တောတွေပြုန်းတီးကုန်တယ်.
Ozone လွှာပေါက်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်..ဆိုတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေ ပိုဖြစ်လာပါတယ်
သဘာဝတရားကြီးက .အကောင်းနဲ့အဆိုး။အနိမ့်အမြင့်။အပူအအေး။အဖြူအမဲ။စသည်ဖြင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားတွေကို ယှဉ်တွဲထားပါတယ်….
ဒါဟာလဲ ဒွန်တွဲမှုတစ်ခုပါပဲ..ဒါ့ကြောင့် ပေစုတ်စုတ်ပြောသလို ဟစ်တလာလက်သစ်ထပ်မလိုပါဘူး..
သဘာဝတရားကြီးကိုက.. ဟစ်တလာလက်သစ်လို့ ဆိုရမလား.. သဘာဝတရားကြီးကဒီလို တုန့်ပြန်မှုတွေလုပ်အောင် တီထွင်နေတဲ့ လူသားတွေကလဲ ဟစ်တလာလက်သစ်တွေလို့ဆိုရမလား.. မသိပေမယ့်.. ကျွန်မကတော့ ဟစ်တလာလက်သစ်ထပ်မလိုတော့ဘူးလို့ထင်မိပါတယ်.. ဒါဟာ ကျွန်မရဲ့ထင်မြင်ချက်သက်သက်ပါ။
Haa….. Haa….. Haa…..
Agree it !!!
“သဘာဝတရားကြီးကိုက.. ဟစ်တလာလက်သစ်လို့ ဆိုရမလား”
eternitymind ရေ၊ တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သဘာဝတရားကြီးကို ဟစ်တလာလို့မမြင်ပါဘူး။ သဘာဝတရားကြီးကဒီလို တုန့်ပြန်မှုတွေလုပ်အောင် တီထွင်နေတဲ့ လူသားတွေကို ဟစ်တလာလက်သစ်လို့မြင်ပါတယ်။
သဘာဝတရားကြီးက balance လုပ်ပေးထားပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက လယ်သမားတွေ မြွေကိုက်သေတာမြင်တော့ လူတွေက မြွေတွေကိုမုန်းပြီး ရန်သူလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ မြွေပွေးသားက ကင်ဆာပျောက်တယ်ဆိုပြီး သတ်လိုက်ကြတာ သိသိသာသာ မြွေတွေနည်းလာတော့ ကြွက်တွေသောင်းကျန်းလာတာ တွေ့တော့မှ မြွေတွေကို စပါးတွေ သီးနှံတွေကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ ကြွက်တွေကို နှိမ်နှင်းပေးတဲ့ မိတ်ဆွေအဖြစ်မြင်မိပါတယ်။ ဒါက သဘာဝတရားကြီးရဲ့ ထိန်းညှိမှုလို့မြင်ပါတယ်။
လူတွေကတော့ သစ်ပင်တွေခုတ် သစ်တောတွေပြုန်းတီး ၊ ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန် ၊ သီးနှံတွေ ဆုတ်ယုတ် ပျက်စီး။ ဒါတွေဖြစ်တာရဲ့တရားခံဟာ လူလို့ပဲမြင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာလဲ.. အဲဒါပါပဲ ဒီနှစ်ပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ငလျှင်တွေ မုန်တိုင်းတွေဆိုတာလဲတော်တော်ဆိုးတာပါပဲ… မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲမကြံဖူးတဲ့ မုန်တိုင်းတွေ ခုနောက်ပိုင်းမှကြံလာရတာကိုး… သဘာဝတရားကြီးတစ်ချက် မွှေ့ လိုက်တာက.. စက်သေနတ်တွေ အများကြီးပစ်နေတာထက် ပိုဆိုးနေတယ်ထင်တာပဲ…
ရုပ်ရှင်ကတော့၂၀၁၂ လို.ပြောနေတာဘဲ။ ဒါပေမဲ့ဂျပန်ငလျှင်ထဲမှာပါသွားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ကမ္ဘာပျက်ခြင်းဟာ၂၀၁၁ပါဘဲ။
– ဗြဟ္မာပြည်ကအပ်နဲ့.. လူ့ပြည်ကအပ်ဆုံတိုက်မိဖို့ထက်တောင်ခက်တယ်… ဆို…
– မနုသတ္တ ဒုလ္လဘ..ဆို…။
– သမုဒ္ဒယာထဲ နှစ်တစ်ရာတခါပေါ်တဲ့ လိပ်ကန်း .. တန်းတန်းမတ်မတ် တစ်ပေါက်တည်းရှိတဲ့ ထမ်းပိုး.. တိုးတယ်ဆို…။
လူသားဟာ.. လူသားတွေဖြစ်တည်ရောက်ရှိမှု့ကိုတော့.. ဘယ်တော့မှ သံသယမဖြစ်မိပါစေနဲ့..။
လူသားဟာ.. လူသားတွေကို.. တိုက်ရိုက်..ပြန်လည်ဖျက်စီးတဲ့အတွေးသံသယ… မဖြစ်မိပါစေနဲ့…။
လူသားအချင်းချင်းအတွက်တော့ သံသယမဖြစ်မိပါဘူးခင်ဗျာ.. ရခဲ့လှတဲ့လူ့ ဘ၀ကိုရောက်လာမှတော့ အားလုံး လူဖြစ်ရခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်..အနှစ်သာရကိုခံစားထိုက်ကြပါတယ်… လူလူခြင်းသတ်ဖြတ်လို့ လဲ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ ပွားများလာတာကို ဟန့် တားလို့ မရနိုင်ပါဘူး…ဒါပေမဲ့..ုသဘာဝကြီးကိုယ်တိုင်ပဲ ဟစ်တလာလက်သစ်လိုဖြစ်နေမှာကိုတော့ တစ်ကယ်စိုးရိမ်မိပါတယ်…
လာမန့် တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါပဲနော.. ဟဲဟဲ.. သဂျီးလေသံအတုခိုးကြည့်တာ…။
လူတွေများလာလည်း မပူနဲ့ … သူ့ဘာသာသူ ကမ္ဘာပေါ်ဆံ့အောင် နေနည်း သိကြတယ် .. အခုတောင်ကြည့်ပါလား … အရင်က တထပ်တည်းနေလို့ရတဲ့နေရာ .. အခု တိုက်တွေ ကွန်ဒိုတွေ အဆင့်ဆင့်ဆောက်တော့ … နေရာပိုလာတော့တာပေါ့… မပူနဲ့ … မိုပျံတိုက်တွေပြီးလျှင် … မြေအောက်လှိုင်ခေါင်းတွေလည်း ထွင်လိမ့်မယ်… ။
ဟုတ်တာပေါ့ မetone ပြောသလို
မြေအောက်အဆင့်မြင့်အိမ်ယာတွေ လာလိမ့်မယ် ..
အခုတောင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြေအောက်ရထားလိုင်းတွေ လုပ်တော့မလို့ …
ကိုယ်လုပ်သင့်တာကို လုပ်သွားကြပေါ့ဗျာ …
ကျွန်တော်လည်း လုပ်သင့်တာသွားလုပ်ရအုန်းမယ် .. အောင့်မထားနိုင်တော့ဘူး ရေတွေ အများကြီး သောက်ထားလို့ဗျ ………
Shar Thet Man (98036 Kyats )